Noma yikuphi ukukhwabanisa ngokuhamba kwesikhathi kuyingozi kwenkampani. Ngabona izinkampani ezingaphezu kuka-500 zamazinga ahlukene, ubukhulu obuhlukene, izakhiwo ezahlukene nezinhlobo ezahlukene zokuphatha, kodwa angizange ngibone inkampani eyodwa ezokwakha ithimba elihle, eliphakeme kakhulu elinomkhiqizo oqinile nomsebenzi omuhle, ophumelelayo, onenzuzo kumasu asebenza isikhathi eside.
Izizathu zokuphathwa kwe nkampani
Inhlanzi ibole ekhanda
Enkampanini lapho umnikazi engaphathi khona abangaphansi, abathintekayo abaxhaphazi abanye abangaphansi, abahlukumezi. Uma umnikazi ene-oda ekhanda lakhe, uzwakala ngokucacile zonke izisusa zakhe kubasebenzi futhi ubapha ithuba lokubonisa amandla abo, bese abasebenzi bezisebenzi ezintsha baphathwa ngokufanayo. Lokhu kukuvumela ukuba uqoqe iqembu labantu abanamandla ngamagugu futhi ungakhubeki esikhathini esizayo ngezinkinga zokuxhashazwa kwabasebenzi ngaphakathi kwethimba.
Ngami, ukukhwabanisa kungenye yezimpawu ezimbi kakhulu. Uma ngibona ukuthi omunye wabasebenzi ufuna ukuthola umphumela kumphathi, usebenzisa inqubo efihlakeleyo yokuqapha - kusobala ukuthi kukhona okungalungile ekuphathweni kenkampani. Cishe, lokhu kuyinkinga ngamanani omnikazi noma umphathi ophezulu ohola leli bhizinisi.
Nginxusa ukuba ungaphathi izimpawu, kodwa ukwelapha inkinga enkulu kakhulu. Inkinga ejulile ngokuyinhloko ekukhulumisaneni phakathi komnikazi kanye / noma abaphathi abaphezulu phakathi kwabo. Futhi-ke isivele isakazwa ngezindlela eziphambene kakhulu, ngesinyathelo ngasinye sokuphindaphinda kwama-multiples. Le nkinga ixazululwa yi-coaching, ukuqeqeshwa okuhlangene noma, ezimweni ezimbi kakhulu, ukubuyiswa kwabantu.
Ake siqonde ukuthi abasebenzi bangasebenzisa kanjani umholi nokuthi benzeni kuleli cala.
Izinhlobo zokuxhashazwa ngabasebenzi
Ukufanisa umsebenzi wokubuyisa
Uma isisebenzi sifuna ukubonisa ukubaluleka kumphathi, futhi ukugxila kwakhe kusuka emphumela kuya enkambisweni, kuyimpawu ukuthi abasebenzi ngaphakathi kwethimba bafuna ukunakekelwa nomphathi, futhi / noma uqasha abantu abaphikisayo abangafuni ukusebenza.
Yethula amamethrikhi aqondakalayo ngokusekelwe kwenani lesenzo ngasinye kumakhasimende. Isibonelo, ufuna ukuqinisekisa ukuthi abasebenzi basebenza ngokugcwele ohlelweni lwe-CRM, futhi ubeka isisusa sokugcwalisa imigqa ohlelweni lwe-CRM. Ngemva kwesikhashana abasebenzi bakho, esikhundleni sokuxhumana kahle namakhasimende, baqale ukugcwalisa imigqa eminingi ngangokunokwenzeka. Ngahlangana nalokhu kanyekanye.
Inkinga ukuthi awukhuthazi into eletha inani. Inani lilethwa yizinkontileka ezigcwalisekile ngesikhathi, ukwenqaba umsebenzi omncane, amanani aphansi omshado. Kodwa inani lokugcwalisa i-CRM akuyona yimuphi omunye ngaphandle kwakho. Futhi umsebenzi wakho kulokhu ukudayisa abasebenzi ukubaluleka kwezenzo ozidingayo. Uma ungeke ukwazi ukuzithengisa, ngakho-ke, ngeshwa, udinga ukuguqula njengomholi, noma ukushintsha abasebenzi bese uqasha abanye.
Amagama amaningi kanye nesimo esingenakuqondakala. Kuyenzeka ebhizinisini eliphakathi nelikhulu, ngemuva kwembiko emikhulu kungenzeka ukufihla iziphambeko eziyisisekelo, ama-jambs noma amaphutha angenhla.
Kudinga abasebenzi ukuthi baqonde ulwazi. Enye yezincwadi ezithakazelisayo kakhulu kimi - "Maverick" uRicardo Semler - ukuxazulula le nkinga, kwaqalwa ukuthi yonke imibiko enkampanini, kuhlanganise nokukhangisa, kufanele ifakwe ekhasini elilodwa le-A4, lapho isihloko sibonisa ingqikithi ebaluleke kakhulu yombiko .
Yebo, lonke ulwazi olunoma yiluphi uhlamvu lungaboniswa ekhasini elilodwa le-A4. Njengoba uMark Twain ehleka, "Ngiyaxolisa ngencwadi ende, anginaso isikhathi sokucabanga ngesikhashana." Ngempela, ematheksthini amade angawafundi, ungafihla noma yini oyithandayo. Siza abasebenzi baveze ngokucacile imicabango yabo.
Isibonelo, zonke izincwadi zangaphakathi ezibhekiswe kumakhasimende, saqala ukusebenzisa isevisi ye-GlavRed. Ngokusetshenziswa okuningi kusiza ukubona wonke udoti womlomo ematheksthini bese usika imicabango kuze kube seqophelweni, enyameni, ekuqedeni amafutha angadingekile kanye nezifiso.
Uhlobo olulula kakhulu lokuxhaphaza, uma uchungechunge lwemibuzo oyicelile, uthola impendulo kuphela yale mibuzo ezuzisa kakhulu isisebenzi.
Ukuze uzuze impendulo kumbuzo ngamunye obhekwe, kungakhathaliseki ukuthi ungajabuli kanjani.
Umzamo wokuphoqa umphathi ukuthi enze umsebenzi ophansi
Ngezinye izikhathi, ngaphansi kwesizathu sokubaluleka kwekhanda, isisebenzi ngandlela-thile kubangela ukuthi umholi athathe ingxenye yomthwalo wemfanelo wokuxazulula izinkinga.
Ungathathi lo mthwalo futhi ubuyisele kumsebenzi. Ungadlala umdlalo omncane - isibonelo, cabanga ukuthi indebe yekhofi etafuleni ngumthwalo wemfanelo. Isisebenzi siza kuwe futhi sithi ubiza leyo nkampani, futhi abafuni ukuxazulula le ndaba naye, kodwa bafuna inhloko yomnyango wokuthengisa. Kuleli phuzu, umthwalo wemfanelo - le ndebe yekhofi - idluliselwa kuwe.
Yini ongayiphendula? "Angazi ukuthi ngenzeni. Yini ongayenza? "Uthi:" Ngingakucela ukuba ubize, ukuze ukwazi ukuxazulula lesi simo. " - "Lalela, angiqondi ngaleso sikhathi, kungani sikukhokhela imali? Mhlawumbe, uzothola indlela yokuxazulula le nkinga? "-" Ngisamile, angizange ngiphumelele. " Uphakamisa ukuthini? " Yini enye engingayenza? "
Uma lokhu kuyinkinga enganaki, futhi isisebenzi singathwali, siyixosha, ngakho-ke isisebenzi asidingekile ukusebenza. Njengomfanekiso waseNdiya: "ihhashi lifile - phuma", ungalikhahleli futhi uphumele.
Umphakathi wethu, kuhlanganise neRussia (Angithandi ukukhiqiza ngokujulile, kodwa nginomuzwa onjalo, ngoba ngifunda esikoleni nasesikhungweni), akucasuli abantu ukuba bazenzele izinqumo. Ngakho-ke, ngokuvamile kubalulekile kubasebenzi abahle, abangenathemba, ukuletha ukuzimela. Ngenxa yalokhu, ungakwazi futhi udingeke ufundiswe ukuthatha umthwalo wemfanelo kukho konke abakwenzayo futhi ubonise ukuthi bazuzisa kanjani inkampani. Uma usho ngokuqondile ukuthi izenzo zabo zithinta kanjani imiphumela yenkampani - buza kubo akuseyona inqubo, kodwa umphumela. Kodwa isikhathi ngasinye umsebenzi wakho ukubuyisela isisebenzi sakhe umthwalo wemfanelo.
Uma umsebenzi exhumana nabo bonke oxhumana naye, uzibeka engenakuqhathaniswa kahle. Isibonelo, uxhumana nombuthano omncane wabantu ezinkampanini eziningana, oxhumana nabo abangekho ku-CRM, kodwa ngesizathu esithile banalo encwadini yefoni. Futhi bambiza ngomakhalekhukhwini. Noma lapho isisebenzi engxoxweni sandisa ukubaluleka kwayo kuzo zonke izindlela ezingenzeka.
Lena inguqulo efanayo yehhashi elifile. Kulesi simo, umsebenzi ubeka imigomo yakhe enkampanini ephakeme kunezinhloso zenkampani ayisebenzisayo. Ngokweqile akuyona embi, kodwa kwenzeka kuphela ekulimazeni inkampani - kubonakala sengathi uma umsebenzi ehamba, inkampani izolahlekelwa abanye oxhumana nabo, ingxenye ye-base, ingxenye yenye into.
Ngingadinga ukuxhumana okuphoqelekile ku-CRM futhi angivumeli ukuthi kungenzeka ukuthi abasebenzi basebenza ngandlela-thile ngendlela ehlukile. Ikakhulukazi kulula ukukwenza kubasebenzi abasha, okuyiwona owenzayo ngemithetho ethile.
Kubasebenzi abadala, lokhu kuzoba nzima - basebenze yonke impilo yabo ngomakhalekhukhwini, futhi ngokuzumayo kudingeka usebenze kuphela nge-CRM-system. Kodwa uma wazi kahle futhi eside, zithembana, kulula: udinga ukuzithengisa umqondo, kungani udinga. Okuthiwa - hhayi ukuze uwasuse, kepha ukuze ungaxhumani neklayenti, ngoba isisebenzi ngasinye sinethuba lokushintsha isikhundla, ukwenza okunye okunye kwenkampani. "Ukuthi lo msebenzi awusizo, ngicela ukuba ugcwalise konke ku-CRM. Ngiyidinga ngempela futhi iyigugu, futhi ngikucela ukuba uyenze i-100%. Ngoba ngenye indlela ayisebenzi "
Ukuthengisa isisebenzi isidingo sokugcwalisa idatha ohlelweni lwe-CRM, uzoshiya isidingo sokuba isisebenzi sibonise ukuthi siyadingeka. Futhi nalabo abangakwazi ukuphuma kulokhu, ngeshwa noma ngenhlanhla, ngingathanda ukusikisela ukuthi ngishiye.
Ukukhalaza phezu kwekhanda lekhanda
Isimo lapho umphathi ehamba ekhanda lomnyango wokuthengisa futhi eze kumqondisi womnyango wokuthengisa.
Umqondisi womnyango wokuthengisa, ongaphansi kwakhe okungekho ngaphansi kwakhe, ukubuyisela umthwalo wokuxazulula lesi simo enhloko yomnyango wokuthengisa. Isimo asamukelekile uma umphathi wezokuthengisa ehlasela umnikazi futhi ezama ukuxazulula inkinga ngaphandle kokuqala ukuxazulula le nkinga kumphathi.
Umbuzo wokuqala nombuzo womnikazi kuphela: ingabe unqume lokhu ngenhloko? Cha, hamba, unqume.
Ukucindezelwa kwesikhathi sokufakelwa kokwenza izinqumo
Isimo lapho umholi ezama ukukona futhi enze isinqumo, hhayi ukuhlehlisela emuva. Hlela manje, sidinga ukuphuthuma ukusebenza nale iklayenti, isibonelo, sidinga ukuvumelana ngesaphulelo.
Esinye sezixazululo ezinhle kunazo zonke ngokumelene nanoma yikuphi ukuxhaphaza yisikhathi. Zonke izimo ezichazwa ngokuthi "izinto ezinhle kakhulu zekhulu" ziza njalo. Futhi ngangivame ukuhlangana nezimo ebhizinisini, lapho isinqumo senziwa ngokushesha, futhi uma singamukeli namuhla, kusasa kuyoba sekwephuzile kakhulu.
Lokhu kuyinto engavamile kakhulu futhi ngezigaba ezingavamile kakhulu zezimpahla - isibonelo, ziyabonakala. Kuzo zonke ezinye izimakethe, ngiyaqiniseka ukuthi singalinda usuku, futhi ngalesi sikhathi uzokwenza isinqumo esilinganisiwe.
Bhala imibono yabantwana
Ukusebenzisa okulula njengokuthi "Angizange ngilindele lokhu", "umholi odlule akenzanga", "njalo uthi", "Ngizokubuka endaweni yami" noma "uyazi ukuthi angikwazi ukuthi" Konke ukuzama ukuphonsa imithwalo yemfanelo noma ukwandisa ukubaluleka kwayo, ukuvimbela i-interlocutor.
Umbuzo wokuqala: kungani ukhuluma nami ngale ndlela, ufuna ukuthi ngitsho lawa magama? Vumela lowo muntu avumele ukuziphatha kwakhe.
Kungcono ukuxoxa ngayo ngokuhlukile, hhayi eqenjini, kodwa ngabanye. Uma umsebenzi ngale ndlela ekhuluma nomphathi wakhe, isisebenzi esinjalo kufanele sithethelelwe. Ngenxa yokuthi lo msebenzi, cishe, uvumela ukuthi akhulume ngendlela efanayo namakhasimende futhi alahlekelwe umthwalo wemfanelo evela kuye ngokwakhe komunye umuntu. Isisebenzi esinjalo asinaso ikusasa - lena ihhashi elifile elifanayo, okuyinto okudingayo ukuthi uhlehlise.
Indlela yokukhipha ukukhwabanisa
Noma yiluphi uhlobo lokuxhaphaza yisimo lapho ohlangothini olulodwa luzuza futhi elinye lulahlekelwa. Ngabasebenzi abanjalo abavumela ukuphatha abanye osebenza nabo, akufanelekile ukusebenza.
Angizange ngisebenze nabantu abanjalo - kuyathakazelisa kimi, njengomuntu osomabhizinisi nomnikazi, ukusebenzisana nabantu abanamandla, abathintekayo nabathandekayo, hhayi nalabo abahlela ukungenwa kwezombusazwe, ukufutheka, abanye balwela imisebenzi kanye nokukhuthazwa ngaphakathi kwethimba. Lena ithoni lamandla, esetshenzisiwe hhayi emphumela, kodwa emdlalweni wezombusazwe wangaphakathi. Lolu hlobo lwabasebenzi alunandaba nomsebenzi, noma akusiyo umgomo wabo. Indawo yabo akuyona inkampani, ngakho akufanele uthathe abasebenzi abanjalo. Futhi uma sebevele bathathe - umkhuba wami uthi lokhu ushintsho lwezikhadi umuntu adinga kusukela eminyakeni eyisishiyagalolunye.
Lokhu kusebenza kwabasebenzi abaphezulu. Uma umlingani wakho ojwayelekile-umdayisi wokudayisa, osebenze naye iminyaka eyishumi futhi waqala, lapho konke kukhulu, kuqala ukuziphatha ngendlela efanayo futhi uzama ukukuphatha, kuyisignali ukuthi sekuyisikhathi sokuyihlukanisa.
Ekuphileni kwami, kwakudingeka ngahlukane nomlingani webhizinisi, ngoba sinezimiso ezahlukene. Kwakungokwemvelo ukuba aphonse umuntu ngaphandle kwabasebenzi ngemali, kodwa kimi kwakungamukeleki. Ngalesi sizathu, sahlukana, futhi ngikholelwa ukuthi lena yinye yezinqumo ezilungile kakhulu ekuphileni kwami. Lokhu akusho ukuthi angizange ngilinganise umlingani wami webhizinisi, kusho ukuthi sinamagugu ahlukene, futhi asimlandeli nje.
Ngikisela ukuthi ufake isicelo kubaphathi, abaqondisi, nabasebenzi, kubandakanya abaphathi bezokuthengisa. Futhi uma ubheka ithimba lakho bese unquma ukuthi ufuna ukusebenza nabasebenzi abaqinile ngempela, futhi udinga abasebenzi bokuthengisa, bese uxhumana nathi.
Umqondo ukuphathwa - amaqiniso okusheshayo
I kwemvelo Ukuphathwa uhlelo ezweni lanamuhla
Amagxolo aspen sikashukela: ukubuyekezwa. Aspen amagxolo sikashukela
Wheel Excavator: Uhlolojikelele, abakhiqizi, Ukucaciswa
Umculi Lyubov Kazarnovskaya: Biography, amakhonsathi, izithombe
Amahhotela Svetlogorsk (Kaliningrad esifundeni): amakheli, izincazelo, ukubuyekezwa
Abantu gqwa enkondlweni Marshak nasekuphileni
Kharkiv National University of Radio Electronics (KNURE): neminyango, amakhono, izibuyekezo, izithombe